Maxaad samayn lahayd haddii Aad Jirran tahay | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Bogga Hore Korona Fayraska (COVID-19) UnitedHealthcare Context link
Haddii aad jirran tahay oo aad ka welwelsan tahay astaamahaaga, waxaa laga yaabaa inay kugu adkaato inaad ogaato waxa aad samayn karto. Aan dul marno waxa la sameeyo haddii aadan hubin.
Ku nagow guriga
Haddii aad u baahan tahay daryeel caafimaad oo degdeg ah mooyee, waxaa fiican inaad iska joogtid. Waxaad ilaalineysaa naftaada iyo dadka kale adigoo ku nagaanayo meesha aad joogto.
Wac dhakhtarkaaga haddii aad qabto astaamaha Korona Fayraska (COVID-19).
Kuwaan waxaa ka mid ah astaamaha sida qandhada, qufaca ama neef-qabashada. Haddii aad u baahan tahay inaad hesho bixiye ku jira shabakadda, gal koontadaada qorshaha caafimaadka.
Gal koontadaadaa qorshaha caafimaadka, haddii aad u baahan tahay inaad hesho bixiye (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)
Haddi bixiyaha caafimaadkaaga kuu qoro baaritaanka ogaanshaha Korona Fayraska (COVID-19).
Hubi tafaasiisha si aad u fahamto caymiskaaga loogu talagalay baaritaanka Korona Fayraska (COVID-19), booqashada iyo daawaynta la xiriirta baaritaanka.
Wax ka ogow caymiska COVID-19 (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)
Raadi xarunta baaritaanka ogaanshaha cudurka haddii loo baahdo
Haddii bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga kuu qoro baaritaanka Korona Fayraska (COVID-19), isticmaal qalabkeena raadinta si aad u hesho xarun baaritaan oo u dhow meesha aad joogto. Tani waxaa loogu talagalay xubnaha keliya.
Isticmaal qalabkeena raadinta xarunta baaritaanka (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)
Dhageyso bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga
La xiriir haddii aad jirran tahay, xitaa haddii ay tahay arrin aan la xiriirin fayraska. Waad kala hadli kartaa telefoonka amaisku day booqasho caafimaad oo fogaan-arag ahhaddii aad u baahan tahay inaad la hadasho bixiyahaaga adoo jooga guriga.
Ka hel dhigaalo badan CDC (Wuxuu ku furmaa Qayb Cusub)
Bogga Hore COVID-19
Macaashyada lagu sharraxay mareegtan waxay sharraxayaan shuruudaha dawladda dhexe iyo siyaasadda qaran ee UnitedHealthcare, macaashyada dheeraadka ah ayaa laga heli karaa gobollada qaarkood iyo qorsheyaasha qaarkood.
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 05.04.2022 waqtiga 10:23 SUBAXNIMO CDT